Turkiga Oo Soomaaliya U Hagar Baxay..Arag Mashiinadii ugu Dambeeyey | Xaqiiqonews
Turkiga Oo Soomaaliya U Hagar Baxay..Arag Mashiinadii ugu Dambeeyey
“Mashiinada neefta bixiya ee lagu sameeyey gudaha Turkey waxaa ku neefsan doona walaalaheen Soomaaliya, oo ay ka jirto mashiino yari aad u darran. Dareenkeena waxa uu mar walba la jiraa kuwa la caburiyo ee iyo dalalka baahida qaba” –Recep Tayyip Erdoğan
Dowladda Turkiga ayaa dhabarka u xiratay in ay Soomaaliya ka samata bixiso waqtigan adag ee Df-ka ay la kacaa kufeyso la dagaalanka covid-19.
Turkiga ayaa markii labaad gar-gaar nooc cusub ah ka so dajiyey Soomaaliya, diyaarad milatari ayaana Muqdisho ka soo dejisay agab caafimaad oo badan, oo ay ku jiraan qalabka neef-bixiyaasha ee aad ugu yar Soomaaliya.
Madaxweynaha Turkiga Racep Tayyib Erdogan ayaa boggiisa Tuwiterka ku qoray sidan ” Mashiinada neefta bixiya ee lagu sameeyey gudaha Turkey waxaa ku neefsan doona walaalaheen Soomaaliya” isagoo intaasi raaciyey in in Turkiga uu mar walbo caawinaayo waddamo uu ku tilmaamay “kuwa baahan”.
Dowladda Erdogan ayaa qeyb weyn ka qaadata tababarada ciidanka Df-ka, dib u dhiska garoomada iyo waddooyinka, waxa ayna tani imaaneysa waqti dalalka caalamka ay iska caawinayaan sidii looga adkaan laha fayruska cusub ee covid-19